के बिहे गर्न सरकारी जागिरे केटा नै चाहिने हाे?
केटा राम्रो छ नि! अधिकृत छ, त्यो पनि सरकारी। जिन्दगी नै धन्न हुनी हो पछिपछि त। फलाना हाकिमकी बुढी भन्लान् सबले। समाजमा इज्जत पनि प्रसस्तै पाइन्छ।
नातागोतामा पनि कसैको छैन हाकिम ज्वाइँ। रवाफै छुट्टै हुन्छ। जिन्दगी सप्रिन्छ। उमेर छँदै गर्नुपर्छ बिहे भन्ने चिज।’ आदि इत्यादिजस्ता कारण देखाइ कन्भिन्स गरिन्छ हाम्रो समाजमा बिहेका लागि।
आफ्नो उमेरको कसैको बिहे हुनु पनि एक समस्या हो। उसको भयो तैंले किन नगर्ने’ भन्ने तनाव दिन थाल्छन् घर, परिवार र समाजले।
अब रह्यो कुरा कि केटा सरकारी जागिरे छ भने, केटा सरकारी जागिरे भएको कारणले मात्रै बिहे गर्नु कतिको सही हो त? के कसैको बाँकी गुण नहेरी मात्रै सरकारी जागिरलाई मध्यनजर राखेर बिहे गर्नु सही हो त?
मेरो हजुरआमालाई ठिक लागे पनि सरकारी जागिरे हो भन्दैमा सुखी राख्छ भन्ने सम्भावनाले मात्रै बिहे गर्नु मलाई त बेठिक लाग्छ।
हजुरआमा! म बिहेपछि श्रीमती मात्रै हैन, जीवनसाथी बन्न चाहन्छु। सेतोपाटी
२०७८ भाद्र २०, आईतवार ०५:४५ 1 Minute 127 Views